Maxaad Ka Ogtahay Qaabka Caruurtaada Aad ugu Horseedi Kartid Xanuun Halis ah? |
Walwalka xad-dhaafka ah wuxuu ka mid yahay xanuunada dhimirka ku dhaca, waxaana keena xanaaqa joogtada ah, sida qofka
‘Somaalida inta badan way dayacaan carruurta, waxaa jira waalid an kala jecleyn in canuga uu qubeystay, inuu wax cunay iyo in kale, ilamaha haddii la dayacana dhib badan ayuu kala kulmayaa bannaanka, sidoo kale haddii canuga culeys ka weyn la saaro oo waalidka uu ka badbaadiyo dhiibaatoyin badan oo dhanka maskaxda ah ayaa ku yimaan kara”, ayuu yiri Dr Cabdiqaadir.
uu niyo jabo ama inuu dareemo in uusan wax qiimo lahayn iyo in canuga uu dareemo in uusan lahayn wax rajo ah dhamaan waxyaabahasina waxay keeni karaan in qofka uu ku fikiro inuu is dilo.
Qaar ka mid ah waalidiinta soomaaliyeed ayaa inta badan caruurtooda saaraa cadaadis dhanka waxbarashada ah oo waxay marwalba doonayaan in caruurtooda ay galaan kaalinta koowaad, taas oo dhaqaatiirtu ay leeyihiin waxay horseedi kartaa inay qadaan walwal darran oo qeyb ka ah xanuunada dhimirka ku dhaca.
Kaliya ah ma ahaan in cadaadis dhanka waxbarashada ah la saaro, waxaa kale oo ilmaha uu ku ridi kara xanuunada dhimirka in waalidiinta ay ciyaalka hortooda mar walbo ay isku dagaalaan, iyo in ilmaha ay marwalba arkaan abihiisa oo u gacan qaadaya hooyada iyo sidoo kale Iskoolka oo ilamaha lagu caayo ama inay dilaan caruur ka waaweyn.
Dr Cabdiqaadir Xuseen Warsame oo ku takhasusay daaweynta cudurrada dhimirka oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in cadaadiska caruurta la saaro uu sabaabi karo xanuunno kala duwan oo maskaxda ku dhaca.
Wuxuu intaa raaciyay in dhibaatooyinkaas ay sidoo kale kamid yihiin hadalada qalafsan ee lagu yiraahdo caruurta, sida ‘hadal iguma soo celin kartid oo kale’.
Dr Cabdiqadir ayaa sidoo kale sheegay inay haboon tahay in waalidka uu kala doorto xiliyada ay arrimaha xasaasiga kala hadlayaan caruurta.
”Waa inay waalidka doortaan waqtiga ugu fiican ee ilmahooda ay la hadlayaan, waa inay la tashadaan, ra’yigooda aad ogaatid,sida ugu fiican ee ilmaha loola dhaqmo sidaas waaye”.
Maxaa keenaa walawalka xad-dhaafka ah ee ku dhaca caruurta?
Waxaa inta badan walwalka xad dhaafka ah u keeni karo carruurta waxyaabo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin:-
In canuga uu xanuun ku dhaca sida sokorta.
Buuqa qoyska sida waalidka oo is dagaala.
In cadaadis la saaro carruurta.
Isku si uma qabto cudurkan ilmaha balse inta badan waxaa laga yaaba in waalidiinta qaar ay fahmaan isbadal ku yimaada carruurtooda. ilmaha ee uu cudurkan hayo waxaa lagu gartaa in canuga uu naco aadidda Iskoolka iyo nolosha uu naco. Waxay inta badan daqaatiirta ku taliyaan in haddi qofku calaamadahaasi isku arko in ka badan labo todobaad inuu booqdo cisbitaalka si loo caawiyo.
Tags: Maxaad Ka Ogtahay Qaabka Caruurtaada Aad ugu Horseedi Kartid Xanuun Halis ah?
Next post Qureec La'aanta Ma Loo Dhintaa?
Previous post Dhaqan Ummadeed, Noocyada Dhaqamada Soomaaliyeed